बीमा – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले राष्ट्रिय अभिकर्ता सम्मान तथा उत्प्रेरणा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीले तोकेको व्यवसायिक लक्ष्य पुरा गरेका देशभरिका ११५ जना अभिकर्ता र एजेन्सी मेनेजरहरुको सहभागिता रहेको उक्त सम्मान कार्यक्रममा व्यक्तिगत अभिकर्ता र एजेन्सी मेनेजरहरुमध्ये उत्कृष्ट १५।१५ जनालाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रमको दोस्रो दिन नेतृत्व विकास र व्यवसाय वृद्धि
पुजन ढुङ्गेल अधिकारी । बीमा भनेको बीमक र बीमित बीचको करार हो, जसमा बीमकले बीमितलाई बीमाशुल्क वापत जोखिम रक्षावरण गरिदिने गरि दुई पक्ष बीच सम्झौता भएको हुन्छ । बीमक र बीमित बीचको करारको कानुनी दस्तावेज बीमालेख हो । जीवन र निर्जीवन बीमालाई तुलना गर्ने हो भने जीवन बीमा बढी संवेदनशील हुन्छ किनकी यो मानिसको जीवनसँग
बैंकिङ खबर । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले मृतक ग्राहकका हकदारलाई बीमा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । अर्घाखाँचीमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएकी सुनिता उपाध्यायका हकवाला पिता रामलखन उपाध्यायले बीमा रकम दावी भुक्तानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । कम्पनिको नियमानुसार लामलखनलाई पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको चेक अर्घाखाँची जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पे्रमलाल लामिछानेले
एलआईसीको १७ औ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
बैंकिङ खबर । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल (एलआईसी नेपाल) लिमिटेडको १७ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । नेपाल पुलिस क्लबको सभाहल, प्रदर्शनीमार्गमा सम्पन्न साधारण सभाले आ.ब. २०७४/०७५ को वासलात र आयव्यय विवरणलाई अनुमोदन गर्दै कम्पनीको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ७०∞ लाभांश पारित गरेको छ, जस अन्तर्गत ३४.४६ % वोनस शेयर र ३५.५४∞
बैंकिङ खबर । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा ४५ प्रतिशतले नाफामा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाएकोमा गत आर्थिक बर्ष ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको हो । यस्तै, कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ
बैंकिङ खबर । सामान्तयना लघुबीमा भनेको न्युन आय भएका व्यक्तिहरुलाई भविष्यमा हुनसक्ने संभावित जोखिमको लागि गरिने बीमा हो । त्यस्ता व्यक्ति जो न्यून आय, आर्थिक र सामाजिक कारण बाट हुन सक्ने जोखिम सँग सामना गर्न नसक्ने छन ती व्यक्ति वा समुदायलाई लक्षित गरी निजहरूको जीवन वा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने बिमा नै लघु बीमा हो ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको २३ औँ बार्षिक साधारण सभा तथा २४ औं बार्षिकोत्सव सम्पन्न
बैंकिङ खबर । प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडको २३ औँ बार्षिक साधारण सभा तथा २४ औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । तिनकुने काठमाण्डौस्थित कम्पनीको कार्यालय ‘प्रभु कम्प्लेक्स’ मा सम्पन्न भएको बार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै श्रावण १७ गते देखि कम्पनी स्थापनाको २३ औँ बर्ष पूरा गरी
युनाईटेड इन्स्योरेन्सबाट मृतकका परिवारलाई १७ लाख ५० हजार दाबी भुक्तानी
बैकिङ खबर । युनाईटेड इन्स्योरेन्सद्धारा अर्घाखाँचीको भूमिकास्थानमा जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरुको परिवारलाई बीमा रकम भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुका परिवारलाई १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । उक्त रकम अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पे्रमलाल लामीछानेले एक कार्यक्रमका बीच बिमितका परिवारलाई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । जीप दुर्घटनामा परेका मृतक
राष्ट्र बैंकको नियमनमा बीमाको दायरा सुस्ताउने संकेत
बैंकिङ खबर । धेरै समयसम्म सुस्त रहेर २ बर्ष यता नै १८ प्रतिशत पुगेको बीमाको दायरा पुनः सुस्ताउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बीमा पोलिसीहरु बैंकहरुबाट बिक्री रोक लगाए पश्चात बीमा पहुँच बिस्तारमा असर पर्ने भएको हो । पछिल्लो समय बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुबीच बढ्दो प्रचलनमा रहेको बैंकास्योरेन्सको नाममा बैंकहरुले आफ्नो कर्तव्य भुलि कारोबार
महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक शाखा सम्मेलन सम्पन्न
बैंकिङ खबर । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो प्रथम वार्षिक शाखा सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । स्ट्राटिजिक विजनेस मिट २०१९ नाम दिइएको सम्मेलनको समुदघाटन इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश कुमार भट्टराईले गरे । सम्मेलनमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख र देशभर रहेका ४७ वटा शाखाका प्रमुखहरू समेत ६५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
लघुबिमा व्यवसायमा असफल बिमा कम्पनी
बैंकिङ खबर । सरकारको निर्देशनबमोजिम लघुबिमा व्यवसाय विस्तारमा बिमा कम्पनीहरू असफल देखिएका छन् । सरकारले कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबिमा व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, कम्पनीहरूले मुस्किलले १ प्रतिशत मात्रै लघुबिमा व्यवसाय गरेका छन् । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ९ महिनासम्ममा कम्पनीहरूमा कुल लघुबिमा व्यवसायको हिस्सा १ दशमलव ३३ प्रतिशत
डि.एन. गिरीको अध्यक्षतामा इन्स्योरेन्स प्रोफेसन सोसाइटी, बाँके गठन
बैंकिङ खबर । नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेसन सोसाइटी (एनआईपिएस) बाँकेको ९ सदस्यीय कार्य समिति हालै गठन भएको छ । लामो समयको प्रयासपछि गठन भएको एनआईपिएस बाँकेको नेतृत्व डि.एन. गिरीले लिएका छन् । बाँके जिल्ला लगायत यस क्षेत्रको बीमा व्यवसायलाई अझ व्यवस्थित एवं परिस्कृत बनाई बीमा व्यवसायमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न उक्त संस्थाले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको
बैंकहरुले आफूखुसी बीमा पोलिसी विक्री गर्न नपाउने
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी बीमा पोलिसीहरु विक्री गर्न नपाउने भएका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयमले छनौट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्जासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य
नौ बीमा कम्पनीले अझै पुर्याएनन् चुक्तापुँजी
बैंकिङ खबर । तेस्रो पटक थपिएको म्याद सकिँदासम्म पनि नौ वटा बीमा कम्पनीले निर्धाति न्युनतम चुक्तापुँजी पुर्याएका छैनन् । बीमा समितिले २०७५ असार मसान्तभित्र नै जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई दुई अर्ब रुपैयाँ र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुलाई एक अर्ब निर्देशन दिएको थियो । उक्त समयमा अधिकांशले पुँजी पुर्याउन नसकेपछि समितिले पहिलोपटक ०७५ पुस मसान्तसम्मको समय दिएको थियो